ရ၏။ ရဟန်းဖြစ်ပြီးလျှင် ပြီးချင်း အထူးဆောက်တည်နေဖို့ မလိုဘဲ အလိုလို ဆောက်တည်ပြီးသား ဖြစ်
ပါး သီလကို ဆောက်တည် စောင့်ထိန်းရ၏။
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ဟောကြားခဲ့သော ဓမ္မမှတ်ကျောက်။
တဲ့ တရားဟာ တရားစစ်မဟုတ်သေးဘူး။
မိဘက သားသမီးကို၊ ဆရာက တပည့်ကို၊ ဆဲဆူဆုံးမတာဟာ ဖရုသ၀ါစာကျူးလွန်ပါသလား?
ဖရုသ၀ါစာ ဆိုတာ ဒုစရိုက်(၁၀)ပါးထဲမှာ တစ်ပါး အပါအ၀င် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုစရိုက်(၁၀)
ပါးကို ကျူးလွန်တဲ့သူဟာ အပါယ်ကျပါတယ်။ မိဘတွေက သားသမီးကို၊ ဆရာက တပည့်ကို
ဆဲဆူဆုံးမတဲ့အခါ ဖရုသ၀ါစာဖြစ်ရင် မိဘဆရာတွေ အကုန်လုံး အပါယ်ကျကုန်မှာပေါ့။
ဒုစရိုက်(၁၀)ပါးမှာ==”ကိုယ်၌ဖြစ်သော ကာယကံ(၃)ပါး”=၁။ ပါဏာတိပါတ၊ ၂။ အ
ဒိန္နဒါန၊ ၃။ ကာမေသုမိစ္ဆာစာရ၊ ”နုတ်၌ဖြစ်သော ၀စီကံ(၄)ပါး”၄။ မုသာဝါဒ၊ ၅။ ပိသုဏ၀ါ
မြန်မာပြည်ကို မီးရှို့သူများ မဖြစ်ရလေအောင်
“ မြန်မာပြည်ကို မီးရှိုးတယ်ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းက ဘယ်ကရတာပါလိမ့် ”
ရှိစဉ် တစ်နေ့က မြန်မာပြည်
တစ်ပြည်လုံးမှာ ဟိုးဟိုးကျော်နေတဲ့ ဇာတ်မင်းသားကြီး ဦးဖိုးစိန်က လယ်တီဆရာတော်ကို လာဖူးတယ်”
ဗုဒ္ဓသာသနာ ကွယ်ခြင်းအကြောင်းရင်း နှင့် သာသနာကို တိုးတက်စေလိုလျှင်
ရဟန်းတို့ ဤဓာတ်တော်များ၏ အရှင်ဖြစ်သော သာရိပုတ္တရာသည် ကမ္ဘာတစ်သိန်းအလွန်ရှိသော တစ်သင်္ချေပတ်လုံး ပါရမီဖြည့်လာခဲ့သော ရဟန်းဖြစ်၏။ ငါဘုရား လည်စေအပ်သော ဓမ္မစင်္ကြာကို အတုလိုက်၍ လည်စေနိုင်သော ငါဘုရား၏ လက်ျာတော်ဝယ် ဒုတိယနေရာ၌ ထိုင်နိုင်သော ရဟန်းလည်းဖြစ်၏။ သာရိပုတ္တရာသည် သာဝကတို့၏ အစည်းအဝေးကို ပြည့်စေနိုင်သော ရဟန်းလည်းဖြစ်၏။
၅၁၂,၀၂၈ ဆူသောဘုရားရှင်တို့အား ရှိခိုးပူဇော်ခြင်းအကျိုး။
၅၁၂,၀၂၈ ဆူသောဘုရားရှင်တို့အား ရှိခိုးပူဇော်ခြင်း ဂါထာတော်ကို ပုဂံခေတ် အရှင်
ဉာဏဂမ္ဘီပြုစုသောကျမ်းတွင် တွေ့ရသဖြင့် အရှင်ဉာဏဂမ္ဘီဆရာတော်သော်လည်းကောင်း၊
ရှေးကသော်လည်းကောင်း၊ မသေချာပါဟု ပညာရှိရဟန်းများက သုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။
ဂါထာတော်အရ အသေင်္ချေ ၂၀ - အတွင်း ( တစ်သေင်္ချေသည် တစ်နောက်မှ သုံည
ပေါင်း တစ်ရာ့လေးဆယ်ဟု ဖေါ်ပြတတ်ကြပါသည်။) ပွင့်သောဘုရားပေါင်း ငါးသိန်းတစ်သောင်း
ခေါ်ပါတယ်။ တရားထိုင်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်သာ တရားကျင့်တယ်လို့ မအောင့်မေ့နဲ့၊ အာရုံတွေနဲ့ တွေ့
နေတဲ့အခါမှာ မကောင်းတဲ့ အာရုံတွေကို ဖယ်ရှားပစ်နေတာလည်း တရားကျင့်တာပါပဲ။
ဗုဒ္ဓသာသနာနှင့် " ရဟန်းအမျိုးမျိုး ” ။
လူဝတ်ကြောင်များက သာသနာ့ဘောင် ၀င်ရောက်၍ ရဟန်းဝတ်လျှင် ကုသိုလ်ရသည်၊ ငရဲမကျ
ဟု ထင်ကြသည်။ အမှန်မှာ ရဟန်းဝတ်ရရုံဖြင့် ကုသိုလ်ရလှသည်တော့ မဟုတ်ပါ။ ရဟန်းဝတ်ပြီး မိမိ
တို့ နှင့်ဆိုင်သော သိက္ခာပုဒ် သီလများကို မကျိုးမပေါက်အောင် ဂရုစိုက် ထိန်းသိမ်းနိုင်မှ ကုသိုလ်ရ
ပါသည်။ သို့ မဟုတ်က(လူဝတ်ကြောင်လို) ထိုင်နေရုံမျှဖြင့် အပြစ်အာပတ် သင့်ပြီး နေတတ်ပါသည်။
လယ်တီဆရာတော် ဘုရားကြီးက==(၁)သဒ္ဓါပဗ္ဗဇိတ၊ (၂)ပညာပဗ္ဗဇိတ၊ (၃)ဘယာပဗ္ဗဇိတ ဟု
ဘုရားရှင်ရဲ့ သားတော် ကိုရင်ရာဟုလာဟာ သာသနာ့သမိုင်း စာမျက်နှာမှာ အင်မတန် ထင်ရှားကျော်ကြားလှပါတယ်။ မသိသူ မရှိသလောက်ပဲလို့ ပြောရမှာပါ။ ခုနှစ်နှစ်သားအရွယ်မှာ ရှင်သာသဏေဖြစ်လာခဲ့တဲ့ ကိုရင်ရာဟုလာဟာ မျိုးရိုးဘက်ကကြည့်ရင်လည်း သာမီဝင်မျိုး။ ရုပ်ရည် ဥပဓိဘက်ကကြည့်ပြန်ရင်လည်း စကြာဝတေးမင်းဖြစ်လောက်တဲ့ ရုပ်ရည်ဥပဓိပိုင်ရှင်။
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 1:28 PM No comments:
မကြာသေးခင်က ကိုရီးယား တရားပွဲတစ်ခုမှာ အမြဲတမ်းတရားနာ ပရိတ်သတ် ဒကာမကြီးတစ်ယောက်က တရားပွဲပြီးတော့ တရားလျှောက်ရင်း သူ့စိတ်ထဲမှာ ရှိတာတွေပါ မထောက်မညှာ လျှောက်ကာသွားပါတယ်။ ဒကာမကြီးက “အရှင်ဘုရားရယ် မြန်မာပြည်မှာ (၈)လလောက်သွားပြီး ဝါတွင်းမှ ကိုရီးယားကို ပြန်ကြွလာတဲ့ အရှင်ဘုရားရဲ့ ပုံကိုကြည့်ပြီး တပည့်တော် အရမ်းအံ့သြသွားတယ်။ ဒီ (၈)လလောက်မှာ ဘာတွေများလုပ်ခဲ့လို့ ဒီလောက်အိုဇာသွားရတာလဲဘုရား။ အရင်တုန်းက တပည့်တော် သိတဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့ မျက်နှာကို အခုပုံကြည့်ပြီး ဘယ်လိုမှကို ပုံဖော်လို့ မရဘူးဘုရား”တဲ့။
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 1:27 PM No comments:
ပြဿနာဆိုတာ စသူရှိလို့ ဖြစ်ရတာပါ။ ဖြစ်အောင်လည်း စစနေကြပါတယ်။ အလွန်က သူတို့က အလွန်၊ အဆိုးက ကိုယ်တွေဖြစ်ဖြစ်သွားပါတယ်။ သူတို့လွန်တာကို အများက မမြင်ဘူး၊ ကိုယ်တွေဆိုးတာကိုပဲ အမှားလို့ မြင်သွားကြတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ်တွေက ဒါကို သတိပြုဆင်ခြင်ရမယ်။ သူစတိုင်း ကိုယ်မထအောင်၊ သူလှုပ်တိုင်း ကိုယ်မလုပ်အောင်၊ သူလွန်တိုင်း ကိုယ်မမွှန်အောင် တခြားနည်းနဲ့ တုန့်ပြန်ရမယ်။ စသူကို အရယူပြီး ဥပဒေနဲ့ ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူနိုင်အောင် လုပ်ယူရမယ်။ မီးရှိုတာ၊ ဖျက်ဆီးတာ၊ ကိုယ်ထိလက်ရောက် တုန့်ပြန်တာ နည်းစနစ်မမှန်ဘူး။
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 1:26 PM No comments:
ပဋိသန္ဓေ ၄ ပါး။
၁။ အပါယ် ပဋိသန္ဓေ = ငရဲ၊ တိရ စ္ဆာန်၊ ပြိတ္တာ၊ အသူရကာယ်တွင် ဖြစ်ခြင်း။
၂။ ကာမ သုဂတိပဋိသန္ဓေ = လူ့ပြည်၊ နတ်ပြည်၊ တွင် ဖြစ်သော ပဋိသန္ဓေ။
၃။ ရူပါဝစရ ပဋိသန္ဓေ = ရူပါဝစရ ဗြဟ္မာဘုံ ၁၆ တွင် ဖြစ်သော ပဋိသန္ဓေ။
ရှင်ပုဏ္ဏကို လူဆိုးလူကြမ်းတွေများတဲ့အရပ်မှာ နေခွင့်ပြုရခြင်း။
ရှင်ပုဏ္ဏက “အရှင်ဘုရား တပည့်တော်ကို လာဆဲမယ်ဆိုရင် ဒီလူတွေ လူတော်လူကောင်း
တွေပဲ၊ ဆဲရုံပဲ ဆဲတာ၊ သူတို့ငါ့ကို ခဲနဲ့မှ မထုတာ၊ ဒီလိုနှလုံးသွင်းမှာပါဘုရား” တဲ့။
အောင်တယ်၊ ကျေးဇူးရှင် မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီးလို စာအဖြေထောက် လွတ်တယ်။
ကံ၏အကျိုးပေးပုံကို တိတိကျကျ တိုင်းတာခြင်း။
ကံ၊ ကံ၏အကျိုးကို ယုံကြည်သူတို့လည်းရှိကြပါသည်၊ မယုံကြည်
သူတို့ လည်းရှိကြပါသည်။ ကိုယ်ပြုသောကံသည်၊ အဂတိမလိုက်စား
သော တရားသူကြီး ဖြစ်ပါသည်။ ကံကိုယုံကြည်သူ ဖြစ်ဖြစ်၊ မယုံကြည်
သူ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကံ၏အကျိုးသည်၊ လွမ်းမိုးပါသည်။
ဗုဒ္ဓစာပေတွေမှာလာတဲ့ (၇)နှစ်အရွယ်မှာပဲ အရိယာဖြစ်သွား၊ ရဟန္တာ ဖြစ်သွားကြတဲ့ လူငယ်များ အကြောင်း ဖတ်နေရင်း ဒီနေ့ခေတ် လူငယ်များအကြောင်း အတွေးပေါင်းစုံ ရောက်လာပါတယ်။ လူငယ်များနဲ့ ဘာသာတရား ဆက်စပ်မှုရဲ့ မတူညီတဲ့ အကြောင်းလေးတွေကို တွေးနေမိပြန်ပါတယ်။ ဘုရားလက်ထက်က အသက် (၇)နှစ်အရွယ် ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ သောတာပန်တည်သွား၊ အရိယာဖြစ်သွား၊ အဲဒီ သောတာပန်စတဲ့ အရိယာ ဘ၀နဲ့ပဲ အိမ်ထောင်သားမွေး အလုပ်များလုပ်ရင်း လောကီလောကုတ္တရာ ကောင်းကျိုးတွေကို ရှာကာ ဘာသာတရားရဲ့ အဆုံးအမအောက်မှ နိဗ္ဗာန်အထိ လျှောက်သွားခဲ့ကြတဲ့ လူငယ်များရဲ့ အခြေအနေနဲ့ ဒီနေ့ခေတ် လူငယ်များရဲ့ ဘာသာတရား အပေါ်အမြင်များ၊ လူငယ်များနဲ့ ဘာသာရေးကြား
သီလညစ်ညူးခြင်းသည် သီလပြတ်ခြင်း၊ ပေါက်ခြင်းသဘော ဖြစ်သည်။ သီလမ
ပြတ်၊ မပေါက်လျှင် သီလ ဖြူစင်၏။ သီလပြတ်ခြင်း၊ ပေါက်ခြင်းသည် လာဘ်လာ
ဘ၏ အရှိအဝါ၊ အကျော်အစော စသည့်အကြောင်းရင်းရှိသော ပျက်စီးခြင်းဖြင့်
လည်းကောင်း၊ မေထုနုသံယောရတရား ခုနှစ်ပါးဖြင့်လည်း ဖြစ်၏။
တစ်ခါတုန်းက ဗာရာဏသီပြည်မှာ ဘုရင်တစ်ပါးဟာ တရားအားထုတ်ရင်း ပထမဈာန်ကို ရထားပါတယ်။
တစ်နေ့တော့ သူဟာ “ရဟန်းတရားက မြတ်သလား၊ မင်းအဖြစ်ကပဲ မြတ်သလား”လို့ ဆင်ခြင် မိပါတယ်။ သေချာဆင်ခြင်တော့ “မင်းအဖြစ်ထက် ရဟန်းတရားက မြတ်တယ်”ဆိုတာသိရပါတယ်။
ဒါကြောင့် တိုင်းပြည် အုပ်ချုပ်ရေးကို အမတ်တွေနဲ့ လွှဲထားပြီး တရားကိုပဲ အားထုတ်နေပါတယ်။ အမတ်တွေကိုလည်း တရားနဲ့အညီစီရင်ဖို့ တခါတည်းမိန့်မှာထားပါတယ်။
ဇနီးမယား၊ သားသမီး၊ အိမ်၊ မြေ၊ စိန်၊ ရွှေ၊ ငွေစတဲ့ လောကီရတနာ ပစ္စည်းတွေကို
စွဲလန်းပြီး ဘ၀ကူးခဲ့မယ်ဆိုရင် ပြိတ္တာ၊ ဥစ္စာစောင့်ဖြစ်ဖို့ သေချာသလောက်ပါပဲ။ ဒီလို အခြေ
ရောက်သွားကြတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေကို ကိုယ်တိုင်ကြုံဖူး ကြားဖူးသူတွေ အများကြီးပါ။ လောကုတ္တ
ရာရတနာကတော့ ဒီလို မဟုတ်ပါဘူး။ ကွယ်လွန်ခါနီးမှာ သတိမရမှာစိုးလို့ သတိပေး၊ ရွတ်
ကိလေသာ နိုးကြွစေသော၊ လူ့ ရွာဘုရားပွဲ။
ဘာသာရေးပွဲ၊ ဘုရားပွဲ၊ ဘုန်းကြီးပျံပွဲများကို ရှေးအစဉ်အလာအရ ကျင်းပလာခဲ့ကြရာ၊ ဘာသာရေး
အရ အနှစ်သာရရှိရှိ ထိထိမိမိ ဆောင်ရွတ်ရမည့်အစား ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲနှင့်( အချို့ သောဒေသတွင် လောင်းက
စားပွဲ ) တို့ လွှမ်းမိုးနေကြသည်ကို ကြားသိနေရပါသည်။ ဓမ္မရေးရာ ကိစ္စရပ်များတွင် ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတို့ 
နေရာယူ လွမ်းမိုးလာသည်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအဖို့ကောင်းသောလက္ခဏာ မဟုတ်ပါ။ ဘာသာရေး
ဦးတည်ချက်ကို တိတိကျကျ ပီပီပြင်ပြင် ချမှတ်ရပါမည်။ ထေရ၀ါဒ ဘာသာရေး ဦးတည်ချက်နှင် လွှဲချော်
“တောင့်တ၍ မရနိုင်သော အရာများ”
အိုခြင်းဆိုတာ၊ မအိုပါလို၊ တောင့်တဆို၊ ရကိုမရပြီ။
နာခြင်းဆိုတာ၊ မနာပါလို၊ တောင့်တဆို၊ ရကိုမရပြီ။
သေခြင်းဆိုတာ၊ မသေပါလို၊ တောင့်တဆို၊ ရကိုမရပြီ။
ကုန်ခြင်းဆိုတာ၊ မကုန်ပါလို၊ တောင့်တဆို၊ ရကိုမရပြီ။
မိဘတို့အား အကောင်းဆုံး ကျေးဇူးဆပ်နည်း
“ ပခုံးထက်၌ ထမ်းလျက်ထား အမိ အဖအား - ညောင်းညာပင်ပန်း နှိပ်နယ်ပေး
ရေပူရေအေး ပေး - ကျင်ကြီးကျင်ငယ်စွန့်ပေစေ လုပ်ကြွေးပြုစုပေ ”
ရဟန်းတို့၊ ဤသို့ပင် အသက်ထက်ဆုံးလုပ်ကျွေးပြုစုသော်လည်း
အမိအဖတို့အပေါ်၌ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်သည်ကို ပြုလုပ်ပေးသည် မမည်သေး။
အပါယ်မည်သည် တကြိမ်ကျခဲ့လျှင် ဘဝအသင်္ချေ သွားတတ်ချေသည်။
ယခုဘဝ၌ ဒါနမှုနည်းပါး၍ ကာယကံ မလုံခြုံ၊ ဝစီကံ သောင်းကြမ်း၊ မနောကံ
ညစ်နွမ်း၍ စရဏတရား နည်းပါးသော သူတို့သည် သေသည့်အခြားမဲ့၌ အပါယ်
သီဟိုဠ်ကျွန်းက တောကြီးတစ်တောထဲမှာ ရဟန်း တစ်ပါးဟာ ၀ိပဿနာတရားကို ရှုပွားအားထုတ်
နေတယ်၊ ၀ိပဿနာနဲ့အတူ အသုဘဘာဝနာကိုလည်း အချိန်ပိုင်းနဲ့ ပွားများတယ်။
တစ်ရက်တော့ အရွယ်ကောင်း ရုပ်ချောအမျိုးသမီး တစ်ယောက်ဟာ လင်နဲ့စိတ်ဆိုးပြီး မိဘအိမ်ကို
ဆင်းလာတယ်။မိဘတွေရှိရာရွာရောက်အောင် ဒီတောအုပ်ကြီးကို ဖြတ်ရသေးတယ်။
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 9:15 AM No comments:
တချို့တချို့သော ပုဂ္ဂိုလ်တွေက လာဘ်လာဘကို သိပ်ပြီး လိုချင်ကြတယ်။
လာဘ်လာဘအပေါ်မှာ တွယ်တာမက်မောနေတဲ့ ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုကုန်ခန်း
သွားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိလျှင် ဘာလုပ်ရမလဲ? အနိစ္စသညာကို ခပ်များများ
ပွားပေးရတယ်။ ဘာအနိစ္စလဲလို့ မေးတော့? ခန္ဓာငါးပါး။ ဘယ်ခန္ဓာငါးပါးလဲ?
မိမိရဲ့ စိတ်ကလေးကို မိမိနူးညံ့သွားအောင် ပျော့ပျောင်းသွားအောင် ဆိုဆုံးမနေ
တဲ့ လုပ်ငန်းခွင်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အနိစ္စသညာကို ကြိမ်ဖန်များစွာ လေ့လာပြီးတဲ့
အခါ အနိစ္စဖြစ်တဲ့ ဒီခန္ဓာငါးပါးအပေါ်မှာ အနိစ္စသညာကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ထိုးထွင်း
သိမြင်ပြီးတဲ့အခါ ဒီအနိစ္စဖြစ်နေတဲ့ ခန္ဓာငါးပါးတို့ရဲ့ ဖြစ်ခြင်းပျက်ခြင်း ဒဏ်ချက်ဖြင့်
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 9:13 AM No comments:
က။ သတိပဌာန် ၄ ပါး။
ခ။ သမ္မပ္ပဓာန် ၄ ပါး။
တောင် စောင့်ရှောက်ပေးပါတယ်။ သူ့ပစ္စည်းတွေကို ထိန်းသိမ်းပေးတယ်။ စောင့်ရှောက်ပေး
သူတော်ကောင်း တရားတွေ တိုးပွားအောင် ဘ၀နေနည်း။
လူတစ်ဦးသည် မိမိကြောင့် လူနှင့်သတ္တ၀ါများ ဆင်းရဲဒုက္ခ ရောက်စေမည့် အပြုအမူ၊ အကျင့်စရိုက်များ
မှရှောင်ကြဉ်ဖို့လိုပါသည်။ ဤသို့ရှောင်ကြဉ်ခြင်းသည်ပင် "လူ့ ကျင့်ဝတ်၊ လူ့ သီလ၊" ဟုဆိုနိုင်ပါသည်။
မိမိကို အကြောင်းပြုလျက် လူနှင့်သတ္တ၀ါတို့ဆင်းရဲဒုက္ခ ရောက်စေသော အပြုအမူ အကျင့်အလုပ် မှန်သ
မျှကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်းသည် လူ့ ကျင့်ဝတ် ဖြစ်ပါသည်။ သီလ၌ တည်သူဖြစ်စိမ့်သောငှာ ကောင်းစွာပြောဆို
ရမည်။ ကောင်းစွာပြုမူ ဆောင်ရွက်ရမည်။ ကောင်းစွာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုရပေမည်။
ယုံကြည် ကိုးကွယ်မှု ဟုဆိုလိုက်သည်နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် သူတော်ကောင်း အပေါင်းတို့ မျက်စိထဲပြေးမြင် ကြမည်မှာ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ဟု
ဆိုအပ်သော ရတနာသုံးပါး ကိုပင်ဖြစ်ပါသည်၊ တကယ်လည်း မှန်ကန်ပါသည်၊ ရတနာသုံးပါးသည် သူတော်ကောင်းတို့ အပေါ်ကျေးဇူး မရှိသ
လော ဟုမေးမြန်းပါက သူတော်ကောင်းတို့ မည်ကဲ့သို့ဖြေမည်နည်း၊ ကျနော့်အဖြေကတော့ ကျေးဇူးလုံးဝ ရှိသည်ဟု ဖြေရပါမည် အဘယ်ကြောင့်
ကျေးဇူးတင်ရသည်ကိုလည်း တင်ပြလိုပါသည် ကျေးဇူးဂုဏ်ကိုသိမှ ကျေးဇူးရှိကြောင်းကို နားလည် သဘောပေါက်ပါမည်။
သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ၊ ဟုအဆင့်ဆင့် ဆိုရာဝယ်..။
သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ၊ သိက္ခာသုံးပါး ရှိတဲ့ထဲမှာ ပညာကို လုပ်ရင်သီလနဲ့ သမာဓိဟာ တခါတည်း ပါသွားပါတယ်၊ ဒီအကြောင်းအသေးစိတ်လေး
တင်ပြချင်ပါတယ် ဘုရားရှင် လက်ထက်တော်က မပဋာ ဟာ သွက်သွက်ခါအောင် ရူးသွတ်နေရာမှ ဘုရားရှင်ဟောတဲ့ ခန္ဓာဉာဏ်ရောက် တရား
တွေကို အာရုံစိုက် နာရင်း ရုပ် နာမ် တို့ရဲ့မမြဲတဲ့သဘော၊ ဆင်ရဲတဲ့သဘော၊ ငါမဟုတ်တဲ့သဘော၊ တွေကိုဆင်ခြင် ပွားများနေတယ်၊ ဒါဟာ ပညာ
၀ိပဿနာ ပျက်စေသော အကြောင်းတရားများ။ (မဂ်တု ဆယ်ပါး)
၀ိပဿနာကိုလိုက်စား အားထုတ်ကြသော သူတော်ကောင်း များဝိပဿနာ၏ လမ်းဆုံးသို့ မရောက်မီ တွေ့ကြုံတက်သော ၀ိပဿနာပျက်စီးရာ အကြောင်း(၁၀)ပါး တွင်တ၀ဲလည်လည် ဖြစ်ပြီး
လမ်းဆုံးသို့ မရောက်မီ ခုလတ်မှာပင် တရားရသွားပြီဟု ထင်သူကထင် သို့မဟုတ် (နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ)ဖြစ်၍ လမ်းလွဲတက် သည်ကို ကျပ်ကျပ် သတိပြုအားထုတ်သင့်ပါသည်။
ဗုဒ္ဓသာသနာ ကွယ်ခြင်းအကြောင်းရင်း နှင့် သာသနာကို တို...
၅၁၂,၀၂၈ ဆူသောဘုရားရှင်တို့အား ရှိခိုးပူဇော်ခြင်းအက...
ရှင်ပုဏ္ဏကို လူဆိုးလူကြမ်းတွေများတဲ့အရပ်မှာ နေခွင့်...